မယ်သံ: August 2012
မန်မန် အရင်စား ကွယ်၊
ဥနီနီ နဲ့ ဆန်ကိုပြုတ်
သနပ်ခါးလေးနဲ့ မွှေး ၊
မေမေ က ဈေးဝယ်
ဈေးဆိုင်ဘေး က မြင်းရုပ်လေး
ပျော်ရွှင် ပြုံးချို မျက်နှာလေး
မေမေ့ ရင်မှာအေး ။ ။
Posted by Thandar Lwin at Friday, August 31, 20129comments:
ဒေါက်တာစိုးလွင် - ဆေးရုံက မဆင်းရ သေမင်းက အိမ်မှာ နှင့် ....ထဲ မှ စာသားများ (၁)
သားပျက် သားလျှော ဘ၀အမော ထဲ မှ ရွေး ဖတ်ချင်သော စာသားများ
အပျိုဖြန်းအရွယ်လေးက စပြီး သွေးမဆုံးခင်အချိန်အထိ ကလေးမွေးဖွားနိုင်တဲ့အရွယ် ပုပုရွရွ ၊ နုနုလှလှ အမျိုးသမီး မှန်သမျှ ပုံမမှန်သွေးဆင်းပြီဆိုတိုင်း ထိပ်ဆုံးကထားပြီး စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဟာ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလ သွေးဆင်းတာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ ။
အဲဒီလောက်တောင် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလမှာ သွေးဆင်းတဲ့ ပြဿနာဟာ များလွန်းလှတယ် လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
မိန်းမသားတွေ ရဲ့ဘ၀မှာ အပျိုပေါက်အရွယ်ကစပြီး သွေးဆုံးတဲ့ အချိန်ထိ လစဉ် ရာသီသွေးဆင်းကြရတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီဆိုပြန်တော့လဲ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းမှာရော၊ နောက်ပိုင်းမှာရော၊ မွေးနေတုန်းရော၊ မွေးပြီးတော့ရော သွေးတွေ သွန်တတ်ပြန်တယ်။ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်း ကာလတွေမှာ သွေးဆင်းရင် ထိပ်ဆုံးကထားပြီး စဉ်းစားရမယ့် ရောဂါ ၃ မျိုးရှိတယ် ။ အများဆုံးက သားပျက်သားလျှော ခြင်း Abortion or Miscarriage ။ နောက်မမေ့သင့်တဲ့ ရောဂါ နှစ်ခုကတော့ သားဥပြွန်သန္ဓေ Ectopic pregnancy နဲ့ စပျစ်သီးသန္ဓေ Hydatidiform Mole တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီ ၃ မျိုးထဲက ဘာများဖြစ်လေ မလဲဆိုတဲ့ စိတ်အတွေးနဲ့အဖြေရှာကြရတာပေါ့ ။
ဒီ ၃ မျိုးကြောင့်ပဲ သွေးဆင်းတာလား ၊တခြားအကြောင်းတွေရော မရှိတော့ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပြန်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ ရောဂါတွေက သားအိမ်ခေါင်းထိပ်မှာ ကင်ဆာဖြစ်တာ ၊ အသားပို ဖြစ်တာ၊မွေးလမ်းကြောင်း ထဲမှာဒဏ်ရာရပြီး စုတ်ပြဲသွားတာ စသဖြင့်ပေါ့ ။ တစ်ခါတလေများ လိင်ဆက်ဆံရင်း မွေးလမ်းကြောင်းမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြိး သွေးသွန်တာတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။
ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းသွေးဆင်းရခြင်းတွေရဲ့ အဓိက အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ သားပျက်သားလျှောခြင်းအကြောင်း စပြီးဆွေးနွေးကြည့်ကြစို့ ။ သားပျက်သားလျှောတာမှာ အဓိက နှစ်မျိုး ခွဲခြားလို့ရတယ် ။ သူ့အလိုလို မတော်တဆ သားပျက်တာ Spontaneous Abortion နဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချတာ Induced Abortion တို့ပါပဲ ။ Abortion ဆိုတာ ကလေးပျက်ကျတာ လို့ အားလုံးသိမ်းကျုံးပြီးခေါ်ကြပေမယ့် ဒီနှစ်မျိုးဟာ လုံးဝမတူပါ ။ အင်္ဂလန် နိုင်ငံမှာဆိုရင် Abortion ဆိုတဲ့စကားကို မလိုချင်လို့ ဖျက်ချတဲ့ ကိစ္စတွေမှာပဲ သုံးတယ်။ မတော်တဆ သားပျက်ကျတာမျိုးမှာ Abortion ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးရင် မိခင်ကို စော်ကားရာရောက်တယ်။ နဂိုကမှ သူအင်မတန် လိုချင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အူဝဲလေး ကြွေလွင့်သွားခဲ့လို့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေချိန်မှာ ဒီအသုံးအနှူန်းဟာ သူ့ကို များစွာထိခိုက်ခံစားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးကလေးပျက်တာကို Miscarriage လို့ပဲ ခေါ်ကြပါတော့တယ် ။
မိခင်ဘ၀ဆိုတာ အမျိုးသမီးတိုင်း အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ဘ၀မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ မိခင်ဆိုတာ သဘာဝ ကပေးအပ်တဲ့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော်တော် နဲ့ ကလေးမရနိုင်တဲ့ စုံတွဲတွေအများကြီး ။ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရသွားပြီ ဆိုရင်တောင် အောင်အောင်မြင်မြင် ကလေးမွေးနိုင်တာ ဘယ်လောက်များမှာလဲ ။ ကိုယ်ဝန်ဟာ အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့် ပျက်သွားနိုင်တာကိုး ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားလုံးရဲ့ ၂၅ ကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှူန်းလောက်အထိ မအောင်မြင်ဘဲ ပျက်ကျ သွားတတ်တယ်လို့ သုတေသနတွေက ဆိုပါတယ်။
ဘာကြောင့်များ အူဝဲလေးဟာ မိခင် ရဲ့သားအိမ်ထဲကနေ အစောကြီးလျှောကျ ပျက်စီးသွားကြရတာပါလိမ့် ။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတတ်တဲ့ အကြောင်းတွေ က အများကြီးရယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေထဲကမှ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းကတော့ အူဝဲလေးမှာ မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့် ပုံမမှန်တဲ့ရောဂါ Chromosomal Defects ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီရောဂါတွေ ကြောင့် ကလေး ပျက်ကျတာဟာ စုစုပေါင်း ရဲ့ ထက်ဝက်မက ၅၀-၇၀ ရာခိုင်နှူန်းတောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုကြတယ် ။ ဒီလို မျိုးဗီဇပုံမမှန် တာဟာ မိခင် ရဲ့ အသက်အပေါ် အရမ်းမူတည်တယ်။ မိခင် အသက်ကြီးလေ ပုံမမှန်တဲ့ ကလေး ပိုမွေး တတ်လေ လို့တောင် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောလို့ရတယ်။ အသက် ၄၀ အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဟာ အသက်၂၀ မိန်းကလေးတယောက်ထက် ၂ဆ ကလေးပျက်ဖို့ ပိုများတတ်တယ် ။ ကလေးမှာ ပုံမမှန်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိနေရင် ဒုက္ခိတကလေးအဖြစ် ကမ္ဘာလောက ကြီးထဲ ရောက်လာတတ်တာဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်အစောကြီးမှာကတည်းက ပျက်ကျသွားခြင်း အားဖြင့် သဘာဝတရားကြီး က အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောလို့တောင် ပြောလို့ရမလားဘဲ ။
အသက်ကြီးလေ မျိုးဗီဇ ပုံမမှန်တဲ့ ကလေးတွေ ပိုပြီး မွေးတတ်လေ လို့ပြောနိုင်တာမို့ မိခင်လောင်းတွေ ကို အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာကတည်းက သားသား၊မီးမီးလေးတွေ ရယူဘို့ ကြိုးစားသင့်တဲ့အကြောင်း ၊အသက်သိပ်ကြီး မှ ကလေးမွေးတာဟာ အန္တရာယ်များတဲ့ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တိုင်းပြောပြလေ့ရှိတယ် ။
အကောင်းဆုံး နဲ့ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာ ပြရရင် Down'sSyndrome ခေါ်တဲ့ ဥာဏ်ရည် နိမ့်တဲ့ ပုံမမှန်ကလေးတွေ ဟာ မိခင် အသက်ကြီးလေပိုပြီးမွေးတတ်လေပါပဲ ။
တခြား ကလေးပျက်ကျစေတဲ့ အကြောင်းတွေ ကို ဆက်ပြီး ကြည့်ကြဦးစို့နော် ။ ကလေးကြောင့် ဇြစ်တဲ့ တခြားအကြောင်းတွေက စပျစ်သီးသန္ဓေ နဲ့ ကလေး နဲ့ တွဲပြီး ဖြစ်တာမျိုးတွေ ၊ အမြွာပူးလေးတွေ နှစ်မြွာ၊ သုံးမြွာ၊လေးမြွာ အမြွာများလေ ပိုပြီးပျက်ကျဘို့ များလေ လို့ ပြောရမလား။ တခါတလေ ကလေးဆီ မိခင်က အစာအဟာရတွေပေးတဲ့ ချက်ကြိုး မှာ ထုံးနေတာ၊လိမ်နေတာ ၊ ပတ်နေတာ တွေကြောင့်လည်း ကလေးသေဆုံးသွားပြီး ပျက်ကျသွားတတ်တယ် ။ တစ်ခါတလေကျတော့ ကလေးမှာ မိခင်နဲ့ သွေးအုပ်စုချင်းတွေ (ဥပမာ Rh မြောက်သွေး အုပ်စု) မတူကြတဲ့အခါမှာ သွေးနီဥတွေ ပေါက်ကွဲပြီး ကလေးမှာ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လည်း ပျက်ကျသွားတတ်တာတွေ ရှိတတ်တယ် ။ ဒါတွေကတော့ အူဝဲလေးမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းတွေ။
မိခင်ကြောင့်လည်း ကလေးပျက်ကျစေတတ်တဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ် ။ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်း ကာလတွေမှာ အကြောင်းတခုခုကြောင့် အဖျားတွေ အရမ်းကြီးပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် နေမကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးပျက်ကျတတ်တယ်။ ရောဂါ ပိုးမွှားတွေ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ Infection တွေဟာလည်း ကလေးပျက်ကျစေတဲ့ တရားခံတွေပါ ။ TORCHS လို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြတဲ့ ရောဂါတွေက ထိပ်ဆုံးကပေါ့ ။ Toxoplasmosis ကြောင် ကတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ကပ်ပါးရောဂါတမျိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် ကြောင်တွေ နဲ့ လက်ပွန်းတတီး မနေရဘူး ။ ကြောင်ချေးကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တာကိုး ။ ဒီရောဂါ ရရင် ကလေးဟာ ပျက်ကျရင်ကျ၊ ပျက်မကျရင် ဆွံ့အ နားမကြား ၊မျက်လုံးကန်း၊ ဥာဏ်ရည်မမှီ ကလေးမွေးတတ်တယ်။ Rebella လို့ခေါ်တဲ့ ဂျိုက်သိုးရောဂါ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ဒီရောဂါပိုး ၀င်ရောက်ရင် ဒီရောဂါပိုးဝင်ရောက်ရင် ကလေး ပျက်ချင်ပျက် ၊မပျက်ရင်လည်း ဒုက္ခိတလေး မွေးတတ်လို့ အင်္ဂလန်လို တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အမျိုးသမီးတိုင်း ဒီရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ထိုးရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ယူတော့မယ့် အမျိုးသမီးတိုင်းကို ဒီရောဂါ ကာကွယ်တဲ့ ဓါတ်တွေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးတယ် ။ မရှိသေးရင် ကလေးမယူသေးဘဲ ကာကွယ်ဆေး အရင်ထိုးခိုင်းတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီရောဂါ ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပုံ ၊ အန္တရာယ်တွေ နဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမယ်ဆိုတာ ကို လူသိနည်းနေကြသေးတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ရောဂါ Cytomomegalo Virus ၊ လိင်အင်္ဂါ မှာ ရေယုန်ပေါက်တာ Herpes ၊ ဆစ်ဖလစ် ကာလသားရောဂါပိုး Syphillis တွေဟာလည်း ကလေးပျက်ကျစေတဲ့ တရားခံတွေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဖြစ်များတဲ့ Malaria ငှက်ဖျားရောဂါ ဟာလဲ ကလေးပျက်ကျစေတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ။ တွိုက်ဖွိုက် လို့ခေါ်တဲ့ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ စသဖြင့် မိခင်မှာဖြစ်တဲ့ ရောဂါ ပိုးမွှား ၀င်ရောက်ခြင်းတွေဟာ ကလေးပျက်စေတတ်တယ် ။
နောက်တစ်မျိုး ကတော့ မိခင်မှာ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေပါပဲ ။ ဟော်မုန်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ( Endocrine Disorders)၊ ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ရောဂါ ၊ သားဥအိမ်မှာ အရည်အိတ်လေးတွေ အများကြီးတည်တဲ့ရောဂါ (PCOS-Poly Custic Ovarian Syndrome) တွေဟာလည်း ကလေးပျက်ကျစေတဲ့ တရားခံတွေပါပဲ ။ အချင်းဖြစ်ဖို့ အူဝဲလေး သားအိမ်မှာ မြဲမြဲမြံမြံ နေစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ပရိုဂျက်စတိရုန်းဟော်မုန်းတွေ ချို့တဲ့ တဲ့အခါ မှာလည်း ကလေးပျက်ကျစေတတ်တယ် ။
နောက်တစ်ခု ထူးဆန်းတာက စိတ် နဲ့ ပတ်သက်တာ။ စိတ်မှာ ရုတ်တရက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ခံစားရတာ ၊ စိုး၇ိမ်တကြီး နဲ့ ကြောက်တာ ၊ ဒေါသတွေ ၊သောကတွေ ၊စိတ်လှုပ်ရှား ထိခိုက်ခံစားမှူတွေဟာလည်း ကလေးပျက်ကျစေတတ်တဲ့ တရားခံပါပဲ ။ စိတ် နဲ့ ကိုယ်ဟာ အမြဲတွဲနေတတ်တာ မဟုတ်လား ။
နောက်တရားခံကတော့ အူဝဲလေး နေရမယ့် သားအိမ်ရဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ ။ ပထမဆုံး မွေးရာပါ သားအိမ်ရဲ့ ပုံမမှန် ချို့ယွင်းချက်တွေ ဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးတာ၊ သားအိမ်နှစ်ခု ဖြစ်နေတာ၊ သားအိမ်နံရံ မှာ အသားပိုတွေ ထွက်နေတာ စတဲ့ သားအိမ်ပြဿနာတွေမှာ သားအိမ်ထဲ ကလေးလေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြီးပြင်းလို့မရအောင် အနှောင့်အယှက်တွေ ပေးတတ်တယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ၊ သားအိမ်ထဲမှာ အသားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ ရောဂါ Fibroids တွေမှာလည်း နေရာလုကြတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်ပြီး ဒီအသားလုံးတွေကြောင့် ကလေးဟာ ကြီးထွားဖို့နေရာမရှိတော့ဘဲ ပျက်ကျသွားရတာတွေ ရှိတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ကျတော့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သားအိမ်ခြစ်ရတဲ့အခါမှာ သားအိမ်နံရံ ရဲ့ အတွင်း မြှေးတွေအားလုံးပါသွားအောင် အားရပါးရ အခြစ်လွန်သွားရင်လည်း သားအိမ်အတွင်းမြှေးဟာ ဖွံ့ဖြိုး ထူထဲမလာတော့ တာကြောင့် ရာသီလဲ ကောင်းကောင်းမလာတော့ဘူး ။ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရှိရင်တောင် ကလေးလေး ၀င်ရောက်ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးရမယ့် သားအိမ်အတွင်းမြှေး လုံလုံလောက်လောက်မရှိတာအို့ ပျက်ကျသွားဖို့ပဲများတယ်။ နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်တာရှိသေးတယ် ။ ဒါကတော့ သားအိမ်ခေါင်းအပေါက်မလုံတာ Cervical Incompletence ပဲဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ခေါင်း အ၀ဟာ ပုံမှန်ဆိုရင် တံခါးချပ်ပိတ်သလို လုံးဝပိတ်နေရမယ်။ ဒါမှ သာ သားအိမ်ထဲက ကလေးလေးကို လုံခြုံမှူပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ နေ့စေ့ လစေ့ ဖြစ်ပြီး မွေးဖို့အချိန်ကျပြီ ဆိုတော့မှ သားအိမ်ခေါင်းအ၀လေးဟာ တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာပြီး ကလေးလေးထွက်လာအောင် လုပ်ပေးတာ ၊ တကယ်လို့ ဒီသားအိမ်ခေါင်းအ၀လေးဟာ ပိတ်မနေဘဲ ဟစိဟစိနဲ့ နဂိုကတည်းက ပွင့်နေပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းမှာကတော့ ပြဿနာ မရှိသေးဘူး။ တဖြည်းဖြည်း ကိုယ်ဝန်က ၅လ ၊၆လ ကျော်လောက် ရလာပြီ ဆိုတဲ့အခါ ကြီးထွားလာတဲ့ သန္ဓေသားရဲ့ အလေးချိန် ကို ဒီအပေါက်လေးက တောင့်မခံနိုင်တော့ဘဲ သူ့အလိုလို ဗိုက်တောင် ကောင်းကောင်းမနာလိုက်ဘဲ အိတ်လိုက်လေး ထွက်ကျသွားပါလေရော။
တစ်ခါတလေ ကျတော့လည်း ကိုယ်ဝန်လနုစဉ်မှာ မိခင်ကို ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးတွေ ကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတတ်တယ်။ ဥပမာ- ငှက်ဖျားရောဂါမှာပေးလေ့ရှိတဲ့ Quinine, ကင်ဆာရောဂါတွေ ကုတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ Cytotoxics သားအိမ်ကျုံ့စေတဲ့ Oxytocins ဆေးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေတတ်တဲ့ ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
Chemical Agents လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်း သားပျက်သားလျှော ဖြစ်စေတတ်တယ်။ မေ့ဆေးမှာ သုံးတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ (Anaethetic Gases) ၊ ဆေးရွက်ကြီး ( Tobacco) ၊ အာဆင်းနစ် ခေါ် စိန် (Arsenic) ၊ Benzene Formaldehyde ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေ (Pesticides)၊ Lead ၊Mercury ၊ Cadmium စတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဟာ ဥပမာ တွေပဲဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကြောင့် ကလေးပျက်ကျတာကတော့ ရှားပါတယ်။
နောက် ကလေးပျက်ကျစေတတ်တဲ့ရောဂါကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ( Immunological Disorders) ပဲဖြစ်တယ် ။ Antiphospholipid Syndrome, Thrombophilia အစ ရှိတဲ့ ရောဂါတွေပေါ့ ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်လနုနု မှာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာ (Recurrent Misdarriage) တွေဟာ ဒီရောဂါတွေ ကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ် ။ ဒါတွေကတော့ သားပျက်သားလျှော ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပဲ ဖြစ်တယ် ။ တကယ်တမ်း မိခင်တယောက် ကလေးပျက်ကျသွားပြီ ဆိုရင် ဘာကြောင့် သားပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို တိတိကျကျ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတတ်ကြဘူး ။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘဲ သူ့အလိုလို ကလေးပျက်တယ် လို့ ကောက်ချက်ချရမယ့် လူနာတွေ က ပိုများလိမ့်မယ် ။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, August 29, 20123comments:
Labels: ကိုယ်ဝန်ဆောင်, မျှဝေခြင်း
ဘူးညွန့်ဟင်းချို ၊ ငါးဖယ်သုတ် နှင့် ချဉ်ပေါင်ကြော်
ဒွေး နဲ့ ထက်ထက် တို့ ရဲ့ တခေတ်တခါ က နာမည်ကြီးလှတဲ့ ကြော်ငြာသီချင်း လေးဆိုရင်း မယ်သံတယောက် ဟင်းချက် နေပါတယ် ........
♫..♫..♫ အိမ်မှာလေ ♫ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ♫ မေလေ ချက်ထားတယ် ♫♫....
ခဏ နေ ချက်ပြုတ်ပီးတော့ ကိုချစ်မောင်ကြီး ကို ထမင်းစားရအောင် လို့ သွားခေါ်လိုက်ပါတယ် ....
" တော့ ကချစ်မောင် ဒီမှာ ထမင်းဟင်း ကျက်ပြီ စားရအောင် ..တကတဲ မှ ကွန်ပျူ တာဘဲ မျက်နှာအပ်နေ ..မိန်းမ ကို ကြက်သွန်တတက် ကူပြီး မနွှင်ဘူး .ဒီမှာ ဆွမ်းတော် ကပ်လိုက်ဦး ပြီးရင် ထမင်းစားဘို့ လာခဲ့တော့ ..ကျမ က မနက်လင်းထဲ က တလှုပ်လှုပ် နဲ့ ဆိုတော့ ဆာ သတော့ "
စသဖြင့် သာယာ နာပျော် ဖွယ် အသံ စာစာလေး နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် အချစ်တွေ တိုးသထက် တိုးအောင် ခေါ်ရတော့တာပေါ့ ...:P
ထမင်းပွဲ ပြင်ဆင် ခူးခပ် အပြီးလောက် မှာ "ဘာတွေ များဖွယ်၂ရာ၂ တွေ ချက်ထားသတုန်း" လို့ မေးရင်း ၀င်လာတော့..
အင်းးးးသူ့အကြိုက်လေး ဦးစားပေးဖြေမှ ......:=)
* ဟောဒီမှာ ငါးဖယ်သုပ် ..ရှင့် အကြိုက် ခရမ်းချဉ်သီးလေး နံနံပင်လေး နဲ့ လေးလေးပင်ပင် သုပ်ထားပါတယ် ..
- နောက်ကော ????
* ဟင်းရည် သောက် မပါမဖြစ် မှန်း သိပါတယ် တော် .ဘူးညွန့် ဟင်းချို လေးနဲ့ ပေါ့ ။ မနေ့ က ပင်နဆူလာ ရောက်တုန်း ၀ယ်လာတာ ..တစည်း ကို S$1.50 တောင် ပေးရတာ တနပ်စာဘဲ ရတယ်ဆိုတော့ မကိုက်လှ ဘူး... (လို့ ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ နဲ့ ပြော)
* ပြီးတော့ ကျမ အကြိုက် ချဉ်ပေါင်ကြော် လေး နဲ့ ပေါ့ ...:D
- ဟွန်း ..ဒါများ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ တဲ့...( သူ ကလဲ ပြောခွင့်သာတုန်း ဖမ်း နှိပ်တော့တာ )
* (ကိုယ်ကလဲ ဘယ် ခံ နေပါ့မလဲ) ရှင် ဒီလို မပြောနဲ့ ..ကျမတို့ ငါးဆူတောင် နားမှာ အုတ်ဖုတ်တုန်းက ဆို မနက် ရေချိုးသွားရင်း ချောင်းဘေး အခင်း က ခရမ်းသီးခူး ထမင်းချက်နေတုန်း ထင်းမီးဖိုထဲပစ်ထည့် ဒီလိုဘဲ ဆီလေး ပြားလေး နဲ့ သုပ် ၊ ငါးနီတူ ငရုတ်သီးကြော် လေး နဲ့လေ အဲဒိတုန်းကတောင် ရှင် မြိန်မြိန် ကြီး စားခဲ့တာ မဟုတ်လား ..။
- ဟာ အဲဒီတုန်းကတော့ ငယ်တုန်း ရွယ်တုန်း ကိုး ၊ ၀မ်းမီးက တောက်နေတော့ ဘာစားစား ကောင်းနေတော့တာပေါ့ ။ အင်းးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားရတာလဲ ပါသပေါ့ကွာ ..အခန့်သင့်ရင် ထန်းရေချို လေး လဲ ရသေးတာ .....အင်းးးးး ဒီအရသာတွေ မထိတွေ့ရတာ နှစ်ပေါင်း များစွာ..
* ဟုတ်ပနော် ..အခုလို တိုက်တာပေါ်မျာ ရေအဆင်သင့် မီးအဆင်သင့် နေရတော့ လဲ အဲဒီတုန်းက မီးမရှိ ၀ါးခင်းတဲပေါ်မှာ လူတွေ အများကြီး စကားပြောရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး စကားပြောရင်း အိပ်ခဲ့ကြတာ သတိရတယ် .လက သာတဲ့ အခါလဲ သာ မှောင်တဲ့ အခါ လဲ မှောင် ...
မနက်ဆို လင်းခါစ မြူခိုးဝေနေတဲ့ ချောင်းထဲ ဆင်းမျက်နှာသစ်ရင်း ရေတခါထဲချိုး ၊ ရေချိုးပြန်တော့ ချောင်းဘေးအခင်းက ပဲသီး ၊ခရမ်းသိး ၊ဘူးညွန့် ဖရဲညွန့် ခူးတန်တာခူး ချက်လိုက် သုတ်လိုက် နဲ့ စားခဲ့ရတာ စိတ်ချမ်းသာ ချက် ..ရှင်ဘဲ အနား ရှိနေလို့လားမသိ လိုအပ်ချက် မရှိပေါင်ပါတော် ....။
ဟောတော့ မယ်သံ တို့ နှစ်ယောက် ရှေးဖြစ်ှေနာင်းဟောင်း ပြောရင်း နဲ့ စားလိုက်ကြတာ ထမင်းတအိုး ပြောင်ပါရောလား....။
ကဲ ထမင်း စားပြီးတော့ လဲ နာနတ်သီး အချို ပွဲ လေး အားပေးလိုက်ပါဦး တော် ။
(မယ်သံ တယောက် အူကြောင်ကြောင် နဲ့ ဘာတွေ ရေးနေသတုန်း လို့ မမေးပါ နဲ့ နော် ..အခုတလော စိတ်တွေ ရှူပ် စိတ်တွေ ကုန် နေလို့ အရင် ချိန် လေးတွေ ကို ပြန်တမ်းတမိလို့ပါ ။)
Posted by Thandar Lwin at Monday, August 27, 20125comments:
Labels: စားမယ် သောက်မယ်...:D
စလေ ကို ဘုရားဖူး မသွားဖြစ်တာ တော်တော်ကို ကြာနေပါပေါ့ ။
စလေသားလေး အပြန် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဘို့ မှာလိုက်တာ ပြန်လာတော့ သူရိုက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ကို ရော့ အင့် အမ လို့ ပေးပြီး ပေါ်မလာ ဇာတ်ခင်းသွားလေတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ထဲက စလေ က ထွက်လာသူ မယ်သံ ခမျာ ဘာဘုရားတုန်း ဘာရာဇ၀င်တုန်း ရယ် လို့ ယောင်ဝါးဝါးဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေလေတော့ ဘုရားဖူး ဆက်သွားဘို့ ခက်နေတော့တာပေါ့ ။
သာသနာ့ရောင်ခြည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးက သူ့ရဲ့ ၀ိဇာတဂုဏပူဇာဝန္နနာ အထိမ်းအမှတ် အတွက် စာရေးဆရာအောင်ကျော်ဆန်း ရေးတဲ့ စလေမြို့ ခေတ်နှောင်းသမိုင်းကောင်း ရုပ်ပုံလွှာ ဆိုတဲ့ စာအုပ် ကို လက်ဆောင် ပို့ပေးလိုက်တော့ ဟန်ကျ သွားပါတော့တယ် ။
ရှင်ပင်တပဲတိုး ဘုရား ဟာ ကျန်စစ်သားမင်း တည်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ် ။
ကျန်စစ်သားမင်း (၁၀၈၄ - ၁၁၁၃) မှာမူကား သထုံသို့ ပိဋကတ် တော်ပင့်ဆောင်ရန်၊ ဥဿာပဲခူး မှ ဂျွမ်းစစ်သည်တို့ ကိုနှိမ်နင်းရန်၊ စွယ်တော်မြတ် ကြိုဆိုရန် ဤစလေဒေသ သို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖြတ်သန်းလူးလာခဲ့သည် ။
ကျန်စစ်သား ၊ ငထွေရူး ၊ငလုံးလက်ဖယ် နှင့် ညောင်ဦးဖီး တို့ ဥဿာပဲခူး ကို ကျူးကျော်တိုက်သော ဂျွမ်းစစ်သည် များ ကို အောင်နိုင်ပြီး အပြန်တွင် ဤရှင်ပင်တပဲတိုးဘုရားတည်နေရာတွင် တညတာ နားခိုခဲ့သည်။ ဥဿာမင်းက သမီးတော် မဏိစန္ဒာခင်ဦး ကို အနော်ရထာမင်းထဲ ဆက်သလိုက်သဖြင့် ဘုရင့်ပဏ္ဏာတော် အဖြစ်ပါလာခဲ့သည်။ ပုဂံနေပြည်တော်သို့မရောက်မီ ဤနေရာတွင် ချစ်ရည်တူစွ မေတ္တာမျှကြသည် ။ အာရုံ ကျင်း၍ မဏိစန္ဒာ ခင်ဦး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကိုဘုရင့်ထံသံတော်ဦးတင်ရန် အလေးချိန်သော် တပဲတိုး နေသည် ။ ထိုအထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ရှင်ပင်တစ်ပဲတိုး ဘုရားတည် ထားသည် ဟု ပါးစပ်ရာဇ၀င် က ဆိုပါသည်။
နောက်တမျိုး မှာ ဥဿာပဲခူး သိူ့အသွား ဤနေရာတွင် သူရဲကောင်း ကျန်စစ်သားက ငထွေရူး ၊ငလုံးလက်ဖယ် နှင့် ညောင်ဦးဖီး တို့နှင့် နောက်လိုက်အခြံအရံ တို့အား စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး အဖြစ် ဥပ္ပါယ်တံမျဉ် ဖြင့် တပွဲတိုးဆေး ထိုးပေးခဲ့သဖြင့် တစ်ပွဲတိုး ဘုရား ဟု မူကွဲပါးစပ်ရာဇ၀င် ရှိပါသေးသည် ။
ကျမ ကတော့ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင်ဘုရား ၀င်း အတွင်း မြက်တွေ ပေါက်နေတာ ၊ တံတိုင်းတွေမှာ ဆေးရောင်တွေ ဟောင်းနွမ်းနေတာ ၊ ဓါတ်ကြိုးတန်း တွေ တွဲကျနေတာ ၊ ဘုရားအ၀င် မုဒ်ဦး အမိုးတွေ ယိုယွင်းနေတာ ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ။
ဖာလူဒါလေး သောက်ပါဦး နော် ( စလေ ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ စလုံး ဧရာဝတီ က ပါ )
Posted by Thandar Lwin at Monday, August 13, 20125comments:
Labels: စလေ အညာ
မယ်သံ တို့ စလေ မှာနေစဉ်က အိမ်ဘေးအိမ် က ခန ခန ဒါန်ပေါက်ချက်စားကြတယ် ၊ မယ်သံ လဲ သွားသွားကူလုပ်ပေးရတာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ကလေးဆိုတော့ ကြက်သွန်လှီး ပူစီနံ ချွေ တာလောက်ဘဲ လုပ်ကြရတာပါ ။
၁၀ တန်းအောင်တဲ့ အထိ မိဘတွေ အိမ်မှာ ကူညီ ချက်ပေးခဲ့ရပေမဲ့ ပွဲပြင်အဆင့် မချက်ခဲ့ရပါဘူး ။ ကျောင်းတက်တော့လဲ မီးဖိုချောင်နဲ့ ဝေးသွားတာပါဘဲ ။
ကျောင်းပြီး လို့ အလုပ်ဝင်တော့လဲ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နေ့ရော ညပါ ဆိုတော့ ၀ယ်ဘဲစားခဲ့တာပါ ။
တခါ ကျောက်ဆည်မှာ ကျောင်းပြန်တက်တော့ စစ်ကိုင်းသူ ညီမလေးတွေ နဲ့ အဆောင်အတူတူပေါ့ ။ စစ်ကိုင်းသူလေးတွေ ကတော့ အစားကို ဘယ်လိုကောင်းအောင် စားရမှန်းသိကြသလို သူတို့ ကိုယ်တိုင်လဲချက်တတ်ကြပါတယ် ။ တွေ့ရာ မြင်ရာ အရွက်တွေ ကတော့ သူတို့လက်ထဲမှာ စားလို့ကောင်းတဲ့ အသုတ်ဖြစ်သွားပါတယ် ။
မှတ်မှတ်ရရ စိန်ပန်းပွင့်သုတ် ၊ သမုန်းဖူး (သမားမုန်းဖူး) သုတ် တွေ၊ အဝေရာ ရွက်သုတ်တွေ ပါ သူတို့ သုတ်ကျွေးလို့ စားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ တကယ်ဆို မယ်သံ တို့ စလေဘက်မှာ အဝေရာ ပင်တွေ ပေါမှ ပေါ ပါ ။ ဒါပေမဲ့ သုတ်စားကြတယ်လို့ မရှိဘူး ။ စလေ ဘက်မှာ က မြူရွက် ၊ ပဲရွက် တွေ ဘဲ သုတ်စားကြတာပါ ။
အညာ အညာ ဆိုတိုင်းလဲ နေရာချင်းကွာရင် စားတဲ့ ဓလေ့ လဲကွာပါတယ် ။
ကျောက်ဆည်မှာ စစ်ကိုင်းသူ ညီမလေး လုပ်ကျွေးတဲ့အထဲ ကုလားပဲ ထောပတ်ထမင်း ကလဲ အမှတ်တရပါဘဲ ။ အဆောင်က ဟင်းချက်ခွင့် မပေးဘဲ ထမင်းဘဲတည်လို့ရတဲ့ အဆောင်ဆိုတော့ ရိုက်စ်ကွတ်ကာလေး နဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ချက်ကျွေးတဲ့ ထောပတ်ထမင်း ၊ အဆောင်သူတွေ ဘတ်ဂျက်က နည်းတော့ လူအများစာ ကို ထောပတ်ချည်းမသုံးဘဲ ဆီရောတဲ့ ထောပတ်ထမင်း၊ ကြက်သားဟင်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အိမ်က ပို့တဲ့ ဘာလချောင်ကြော် ၊ငါးပိကြော် နဲ့ တွဲပြီး စားခဲ့ရတဲ့ ထောပတ်ထမင်း အရမ်း အရမ်းကိုစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။
ကျောင်းပြီး အလုပ်ဝင် အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်လက်ရာ မကောင်းရင် အလွယ်ထွက်ဝယ်စားလို့ ရနေခဲ့တော့ မြန်မာပြည်မှာ စိတ်ပါလက်ပါ ချက်မစားဖြစ်ပါဘူး ။
စင်္ကာပူ ကိုရောက်လာမှ ဘဲ ကိုယ့်လက်ရာ အစွမ်းပြရတော့တာပါဘဲ ။ မယ်သံတို့ စင်္ကာပူ မှာ ဘာတွေ တိုးတက်လာလဲ ဆိုရင် ထမင်းဟင်း ချက်တတ်တာ တွေ တိုးတက်လာပါတယ် လို့သာဖြေရမှာပါဘဲ .....:P
ပိတ်ရက်တွေ အိမ်ကိုဧည့်သည်လာရင် စားလို့လဲကောင်း ၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ချက်ရတာ သိပ်မပင်ပန်းတဲ့ ထောပတ်ထမင်း နဲ့ ဧည့်ခံဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုချစ်မောင် ကလဲ ကြိုက်လို့ပေါ့လေ ..အဟမ်း ..အဟမ်း ..:D
ကဲ မယ်သံ့ လက်ရာ ထောပတ်ထမင်းလေး အားပေးကြပါဦး ။
ဆန် ကိုရေဆေးထားပါ ။
- လူ ၄ယောက်စာ အတွက် ဆန်ချင်ခွက်နဲ့ ၃ ခွက် ဆိုရင် ထောပတ် သို့ မာဂျရင်း (မြန်မာမှာဆို မားသားချွိုက် လိုမျိုး) ၂၅၀ ဂရမ် ထည့်ပါတယ် ။
- ထောပတ်ကို ပေါင်းအိုးထဲထည့် ဂက်စ်မီးဖို ပေါ်မှာ ဆူအောင်တည်ပါတယ် ။
- ဆူရင် ကြက်သွန်အနီ စိတ်ထားတာကို ထည့်ပါတယ်၊ နွမ်းသွားပြီဆိုရင် ပဲဝါလေး ရေဆေးထားတာ ထည့်ပါတယ် ။
(ပဲဝါလေး က နူးလွယ်တော့ ကြိုပြီး ရေစိမ်ထားစရာမလိုပါဘူး)
- နောက် နာနတ်ပွင့် ၊ ပူစီနံ ကြိုက်တတ်ရင်ထည့်ပြီး (တခြားကြိုက်တတ်တဲ့ ကရဝေးရွက် ၊ သစ်ဂျပိုးခေါက်စတာတွေ ထည့်လို့ရပါတယ် ။ ကျမ ကတော့အနံ့စူးစူးရှရှ မကြိုက်တဲ့အတွက် အနံ့အတွက် နာနတ်ပွင့် ကိုဘဲ သုံးပါတယ်) မွှေပြီး ချက်ချင်း မီးကို ပိတ်လိုက်ပါတယ် ။
- ရေဆေးထားတဲ့ ဆန်ထည့် ၊ ရေကို ပုံမှန် ချိန်သလောက်ဘဲ ထည့်ပါ ။ သကြားလေး ၊ဆားလေး ထည့်ပြီး အိုးကို ကွတ်ကာထဲထည့် ခလုတ်နှိပ်ထား ပါ ။
- ပွက်လာပြိ အငွေ့တွေ အရမ်းထွက်လာပြီဆိုရင် သီဟိုစေ့ ထည့် ပြီး အဖုံးကိုပြန်ပိတ်ထားပါ ။
- ထမင်းကျက်လို့ ခလုတ် ကျသွားပြီဆိုရင် အပေါ်က ပဲစိမ်းဘူး (ဖောက်ပြီးရေစစ်ထားတာ) ထည့် နောက် စပျစ်သီးခြောက်ထည့် ပြီး ပြန်ဖုံးထားပါ ။ ၅ မိနစ် ဆို မီးပိတ်လို့ ရပါပြီနော် ။ အဖုံး ကိုမဖွင့်လိုက်ပါနဲ့ဦး နောက် ၁၀ မိနစ်ကျမှ အဖုံးဖွင့်ပြီး ချွေးခါပေါ့ နော် ။
ထမင်း ပုံပျက်မှာစိုးလို့ အေးသွားတော့ မှ မွှေပါတယ် ။
အလုပ်ရှူပ်သက်သာပြီး အရသာလဲရှိ၊ ပိတ်ရက်မှာ အိမ်ရှင်ထီးများ ၀၀လင်လင် စားချင်လဲအဆင်ပြေ ၊ဧည့်သည် ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးမယ် ဆိုလဲ မျက်နှာ ပန်းလှစေတဲ့ ထောပတ်ထမင်းပါရှင် ။
ဒါကတော့ ထောပတ်ထမင်းနဲ့ တွဲဖက် စားဘို့ အဆင်ပြေတဲ့ ကြက်သားဆီပြန်ဟင်းပါ ။
အအီပြေ ချဉ်ပေါင် ရေကြဲလေးနဲ့ ပေါ့ ရှင် ။
တကယ်က ဘာလချောင်ကြော် လေးပါ မှ ပြည့်စုံပါတယ် ။ အချို၊အချဉ် ၊အစပ် လေးပေါ့ ၊ ဘာလချောင်ကြော် ကို ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်လို့ပါ ။
ပိတ်ရက် မှာ အရသာရှိတာလေး စားပြီး အဆီယစ် ကြပါစို့လား ။ ကောင်းကောင်းစား ကောင်းကောင်းနားပြီး ၀လာမယ်ဆိုရင်တော့ တရားခံစာရင်းထဲ ဆွဲမထည့်ကြေးနော့ ။
Posted by Thandar Lwin at Saturday, August 11, 20127comments:
Posted by Thandar Lwin at Monday, August 06, 20124comments:
စင်္ကာပူ မှာ ဒီလ 19 ရက်နေ့Hari Raya Puasa အတွက် ပိတ်ရက်က တနင်္ဂနွေ ဆိုတော့ ကပ်ရက် တနလာင်္နေ့ ကို Public Holiday သတ်မှတ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ပိတ်ရက် ဆက်တိုက်လေး ဖြစ်လို့ ခရီးထွက်ချင် သူများ နီးနီးနားနား အလည်အပတ်သွားရအောင် တရုတ်နှစ်ကူးတုန်းက မယ်သံ တို့ သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ Batam အကြောင်းလေး ရေးလိုက်ပါတယ် ။
မယ်သံတို့ သွားခဲ့တာ တညအိပ် ၂ ရက်ခရီးလေးပါ ။ စနေ ပါ ပိတ်တဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလို ဆက်တိုက် ပိတ်ရက်တွေ ကို စောင့်စရာမလိုဘဲ ဗီဇာ ကြိုလျှောက်စရာ မလိုတဲ့ အတွက် ဆန္ဒ ရှိရင် တန်းပြီး သွားနိုင်တဲ့ နေရာလေးပါနော် ။
မယ်သံ တို့ က တရုတ် နှစ်ကူး 23.01.2012 က သွားပြီး 24.01.2012 မှာ ပြန်လာခဲ့တာပါ ။
တည အိပ်မှာကို ဟိုတယ် ၊ ခရီးစဉ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် မစီစဉ်တော့ဘဲ တိုးရ် နဲ့ သွားခဲ့ပါတယ် ။ အင်တာနက်ထဲ မှာ Batam Tour cheap price လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာတော့ အများကြီးဘဲ ထွက်လာတဲ့ အထဲက Spa Villa Leisure Pte.Ltd. ကို ရွေးခဲ့ပါတယ် ( Spa ကိုစိတ်ဝင်စားတာ ရော ၊ တည်းရမဲ့ KTM Resort က ပင်လယ်ကြီး ဘေး မှာ ရှိတာရော ၊ ရုံးက ညီမလေးတယောက်က အယင်သွားဘူးထားတော့ ကောင်းတယ်လို့ ထောက်ခံတာလဲပါတာပေါ့) ။
spavilla@batamspavilla.com ကို အီးမေး ပို့ပြီး အသေးစိတ် အစီစဉ် ကို သိချင်လို့ မေးလိုက်တဲ့ အခါ
1. Adult c/w :S$108.00
-2way ferry tickets
- Land Transfer(pier-resort-pier)
- 90 mins Ocean View Spa
- City tour withaseafood lunch on day 2
2. Terminal Charges (Seaport Taxes) :S$ 27.00
3. CNY Surcharges :S$ 20.00
ဆိုတော့ အထက်ပါ အားလုံးအတွက် တယောက် ကို S$ 155.00 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အသွား အပြန် Ferry ရှိတဲ့ အချိန် ကိုရွေးခိုင်းတော့ ဒီက အသွားကို တတ်နိုင်သမျှ စောစော (93း0 am) ရွေးပြီး နောက်တနေ့ အပြန်ကိုတော့ နောက်ကျ ပြီး ညနေ (7း 30 pm) ရွေးခဲ့ပါတယ် ။
Ferry Schedule ကို ဒီမှာ http://sindoferry.com.sg/ ကြည့်ျနိုင်ပါတယ် ။
#02-50/51, 2nd Sty Harbour Front မှာ Batam Fast Ferry Service Counter မှာ Boarding pass & return Ferry tickets ကို မနက် 83း0 မှာ ယူရပါတယ် ။
Batam - Sekupang Ferry Terminal (1st Stop) အထိ ခရီးသွားချိန် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ် ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလို ferry နဲ့ သွားခဲ့ရတာပါ ။ အလွန်မြန်ပါတယ် ....:D
Sekupang Ferry Terminal ကိုရောက်လို့ အင်ဒို အင်မီဂရေးရှင်း ကိုဖြတ် အပြီး အပြင်ထွက်လိုက်တော့ KTM Resort က ကြိုတဲ့ ကားလေး ကို အသင့်တွေ့ရပါတယ် ။ ၈ မိနစ်လောက် ကြာတော့ KTM Resort ကိုရောက်ပါတယ် ။ ၁၁ နာရီ ၀န်းကျင်လောက် ရောက်သွားပြီး Hotel Reception မှာ စာရင်း သွားပေးတော့ ကျမတို့ က နေ့လည် ၂ နာရီ မှ အခန်းထဲ ၀င်ရမှာမို့ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်စောင့် ရပါမယ် လို့ပြောပါတယ် ။ မယ်သံတို့ သူငယ်ချင်းတဖွဲ့ တရက်စောသွားတာ သတိရလို့Reception ကို မေးလိုက်တော့ သူတို့ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာကြောင့် အဲဒီကို လိုက်ပို့ခိုင်းပြီး သွားနားပါတယ် ။ (တကယ်တော့ ပင်လဲမပင်ပန်းသေးပါဘူးနော်)
စုံတွဲတွေ ဓါတ်ပုံ ရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့နေရာပါ ။
ဟိုတယ် Reception အ၀င်...
ပင်လယ် ကြီး ရဲ့ ဘေး...
နှစ်ယောက်သား အိုင်ဖုန်း နဲ့ အင်တာနက်မသုံးရ လို့ သဘောတူညီချက် ယူထားလို့ အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်စရာ စာအုပ်လေးတွေ ယူလာခဲ့ပါတယ် ။
စာဖတ်ရတာ ညောင်းလာတော့ ၀ရံတာ ကနေ ပင်လယ်ကြီးကို လှမ်းမျှော် ငေး ရင်း လွမ်း ရ ဆွေးရတယ် ..:D
ဗိုက်ဆာ လာတော့ စားသောက်ခန်းမ ကိုချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ် ...
ပင်လယ်စာ တွေ စားရင် ကန်စွန်းရွက်ကြော် တော့ စားဖြစ်အောင် စားပါတယ် ။
ဟင်း ချည်းဘဲ မတင်းတိမ် တတ်တော့ ထမင်းကတော့ စားဖြစ်အောင် စားပါတယ် ။
အုန်းရည် ရဲ့ အရသာ က စင်္ကာပူ ထိုင်းဆိုင်တွေ ကလို မချိုဘဲ ချဉ်ချဉ် စူးစူး ကြောင့် ထောပတ်သီးဖျော်ရည်ကို ထပ်မှာပြီး သောက်ခဲ့ပါတယ် ။ သံပုရာ ရည် က ပင်လယ်စာနဲ့ မတည့်ဘူးတဲ့ ...:P
ပို့စ် ကို တခု ထဲ အပြီးရေးချင်တာ ဓါတ်ပုံတွေ များပြီး ရှည်သွားလို့ နောက်တပိုင်း ခွဲပြီး ရေးပါမယ် ။
ဆက်ပြီး အားပေး ကြပါဦး နော် ...:D
တမိသား နဲ့ တမိသား ပေါင်းစပ်တဲ့ အခါ နေရာဒေသ ၊ ဓလေ့ ၊နေ့စဉ် အလေ့ အထ တွေ ကွာနေရင် တော့ အတော် ညှိယူရတာပါ ။ ဒီအထဲမှာ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအသောက် ကို ညှိရတာတော့ ပိုခက်မယ် ထင်ပါတယ် ။
ကျမ ကတော့ အစားအသောက် ကို အနံ့မပြင်း အရသာမစူးရှ ရင် အားလုံး စားပါတယ် ။ အညာသူ ဆိုတော့ ရေချိုငါး စားတတ်ပေမဲ့ ရေငံငါး တို့ အောက်ပြည်အောက်ရွာက ငါးတို့တော့ စားကျင့် သိပ်မရှိဘူးပေါ့ ရှင် ။ အဲ ငပိ ဆို အိမ်မှာက စိမ်းစားငပိ စားတာများတယ်ပေါ့ရှင် ။
အိမ်က ကိုချစ်မောင်ကြီးကတော့ အောက်ပြည်ရွာသားဆိုတော့ ငါးကြိုက်တယ်ရှင့် ။ ပြီးတော့ ငါးချဉ် ပုစွန်ချဉ် သုပ်စားတာ ကြိုက်တယ် ။ ကျမတို့ဖြင့် ပုစွန်ချဉ် ငါးချဉ် ကို အသားစိမ်း ငါးစိမ်း လို့ဘဲ မြင်နေတော့ မစားရဲပေါင်ရှင် ။
သူက တော့ အသားထက် ငါး ကို ပိုကြိုက်တယ်ရှင့် ။ ချစ်သူ ဘ၀ ကများ ကျမ အဆောင် ကိုလာလည် ရင် ဟင်းတွေ ချက်ပြီးယူလာခဲ့တယ် ။ ငါးပြေမ ကို မရမ်းသီး နဲ့ နှပ် ၊ ငါးခူ ကို စဉ်းကောပြီး ရဲရိုရွက် ထည့်ချက် ၊ ငါးမုတ်ကြော် နဲ့ သူ ချက်ပြီး ယူလာတာတွေ က စားလို့ ကလဲ ကောင်းတော့ သူ့ကိုယူဘို့ ရဲရဲ ကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့...:D
အဲ ယူပြီး မှ မှားမှန်းသိတာပါ ( ဘွာတေး ဟုတ်ပေါင် ယောင်ပြီးပြောမိတာပါ )
ကျမ က ဟင်းချက်ရင် အသား ငါး ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်း အားလုံးပစ်ထည့်ပြီး ချက်ပလိုက်တာပါဘဲ ။
သူက ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူ နီ ကို သေချာထောင်း အရောင်အတွက် ငရုတ်သီးပါထောင်း ဆီသတ်ပြီးမှ ချက်တာ ကြိုက်သတဲ့ ၊ မွှေနေ အသားထည့် မွှေ ၊ နောက် ငံပြာရည်လေးထည့် တဲ့ တဆင့်ခြင်း ပေါ့လေ ။ ပို အရသာရှိသတဲ့ ..ဒါပေမဲ့ ညှော်မှာ မီးပူ ခံရမှာက ပိုသေချာပါတယ် ။ ကျမ က အရပ်လဲ ပု သလေ ။
ဒါပေမဲ့ မိန်းမ ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် အိမ်ဦးနတ် အကြိုက် ကို ကြိုးစားချက်ပေးကြတာပါဘဲ ။ ပင်ပန်းပေမဲ့ ကိုယ်ချက်ထားတာ ကို မိသားစု က မြိန်မြိန်ယှက်ယှက် အားပေးတယ်ဆိုရင် မောသမျှ ပြေတာပါဘဲ လေ ။
ပိတ်ရက် ဆိုရင်တော့ သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ လေးတွေ ချက်စားဖြစ်တာပေါ့ ။
ဘူးသီးဟင်းချို ၊ ကြက်သားဆီပြန် ၊ကျောက်ပွင့်သုပ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော် နဲ့ တို့စရာ အစုံပါ ။ စားကြပါဦး ရှင် ...:D
ထူးထူးခြားခြား ဟင်းမဟုတ်ပေမဲ့ စားလို့ မြိန်တဲ့ ဟင်းအတွဲ အဖက် ပါ ။ ဟင်းတမျိုး စီ စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိပေမဲ့ ဒီအတွဲ အဖက် တိုင်းချက်ရင် စားလို့မြိန်မှာ သေချာပါတယ်နော် ...။
ဒါကတော့ ပဲဝါလေးဟင်းချို ၊ ကင်းပုံသီး ချက်နဲ့ ငါးကြော် ကြက်သားကြော်ပါ ။ သရက်ချဉ် သုပ်လေး ၊ ဘာလချောင်ကြော် ငံပြာရည်ကြော် လေးနဲ့ တွဲဖက်စား ရင် မြိန် မှ မြိန် ပေါ့ ရှင် ။ ကျမ ကတော့ စိမ်းစားငပိထောင်း ကို သံပုရာရေ ညှစ်ပြီး စားပါတယ် ။
ငါးခြောက် ၊ရုံးပတီသီးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဘူးသီးချဉ်ရေပါ ။ ရုံးဖွင့်ရက် အလုပ်ရှူပ်ချိ်န် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မချက်နိုင်တဲ့ ကျမ အတွက်တော့ အလွယ် အမြန်ချက်လို့ရတဲ့ ဒီဟင်း နဲ့ ငံပြာရည်ကြော် နဲ့တင် စားလို့ မြိန်ပါတယ် ။ ကိုချစ်မောင် လဲ ကြိုက်တယ်ပေါ့ရှင် ...။
သီးစုံချဉ်ရေ ၊ ၀က်သားဟင်း ၊ ပုစွန် ဆီပြန် နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကြော်ပါ ။ မေမေ က ၀က်သားမစားလို့ ပုစွန် ဆီပြန်လေး ပါ ချက်လိုက်တာ ။ ဒီ လို ဟင်းအတွဲ ဆို ကိုချစ်မောင်တို့ က ၀ိတ်ချဘို့တွေ ဘာတွေ မေ့သွားတယ်ရှင့် ..အဟင်း..ဟင်း..ဟင်း ။
အပေါ်က သီးစုံချဉ်ရေ ပါဘဲ မြင်သာအောင်လို့ သတ်သတ်ရိုက် ထားတာပါ ။
ဟင်းနုနွယ် ရွက် နဲ့ တိုင်ထောင်ပဲသီး အရှည် နဲ့ သုပ်ထားတာပါ ။ ထမင်း ပူပူလေး နဲ့ စား စား ၊ နေ့လည်နေ့ခင်း ရေနွေးလေး နဲ့ မြည်းမြည်း ကျမ ကတော့ အရမ်းကြိုက်တာပါဘဲ ရှင် ။ အလွယ် သုပ်လို့ရတာလဲ ပါတာပေါ့လေ ။
နောက် နေ့ မှ တခြားချက်စားဇြစ်တာလေးတွေ တင်ပါဦးမယ် ။ ပုံမှန် ဟင်းလျာလေးတွေ မို့ ချက်နည်း ရေးနေစရာ မလိုပါဘူးနော်...။
Posted by Thandar Lwin at Friday, August 03, 20126comments:
၀ါဆို လပြည့် (ဓမ္မစင်္ကြာ အခါတော် နေ့) အမှတ်ရစရာများ
၀ါဆိုလပြည့် နေ့ အား ဓမ္မစင်္ကြာ အခါတော် နေ့ဟု ခေါ်တွင်ခြင်း
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင် သည် ဗာရာဏသီပြည် အနီး ဣသိပတန တောအုပ်မှာ
ဓမ္မစကြာ တရားတော်ကို ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ မှစပြီး စတင်ပြီး ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ကို ဓမ္မစင်္ကြာ အခါတော် နေ့ ဟု ခေါ်တွင်သည်။
ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ငါးပါးလုံး အာဒိဖလ သောတာပန်တွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ် ။
မယ်သံ တို့ ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ ဒီလို အခါကြီး ရက်ကြီးဆို အရမ်းပျော်ပါတယ် ။ ၀ါဆို လပြည့်ရော လပြည့်ကျော် ၁ ရက် ရောကျောင်းပိတ်တဲ့အပြင် မပိတ်ခင် တရက် မှာလဲ ကျောင်းက မတ်ရပ်ဘုရား ကြီးကို ၀ါဆိုပန်း ကပ်ကြရပါတယ် ။
တကယ်တော့ ၀ါဆိုလပြည့် ကျော် ၁ ရက်ကမှ ၀ါဆိုပန်းကပ်ကြတဲ့ ရက်ပါ ။
အိမ်မှာက ပန်းကို စီးပွားဖြစ် စိုက်တဲ့ အိမ်ဆိုတော့ ကျောင်းကိုယူသွားမဲ့ ပန်းကိုတကူးတက ရှာဝယ်နေစရာမလိုပါဘူး ။ ဒီကြားထဲ သူငယ်ချင်းတွေ ရော တခြားကျောင်းသားတွေ ကပါ ၀ယ်ကြတာဆိုတော့ အိမ်မှာ ပန်းရောင်းကောင်းတဲ့ ရက် ၊ ၀င်ငွေ ကောင်းတဲ့ ရက်များပေါ့ ။ သစ်ခွ ပန်းတွေ ဆိုရင် ဒီရက်မှာ ပေါပေါများများ ရောင်းရအောင် တကူးတက ချန်ထားပါတယ် ။ မိုးလဲ မရွာပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရတာပေါ့ (မိုးရွာရင် စပယ်ဖူးတွေ၊ ဇွန်ပန်းအဖူးတွေ က အာ မလာဘဲ ငုံ နေတော့တာ) ။ ရွက်လှ ပန်း တွေ ကို ပါ ချိုးရောင်းကြတဲ့ အချိန်ပါ ။
မယ်သံ တို့ အိမ် ကတော့ ဒီရက်တွေ မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားတာထက် အိမ်မှာ ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး ၀ါဆို သင်္ကန်းကပ်တာရော မိတ်ဆွေ တွေ ကိုပါ မုန့်ဟင်းခါး အုန့်နို့ ခေါက်ဆွဲ စသဖြင့် အလှူလုပ်ပါတယ် ။ နွေ ရာသီ မှာ စပယ်ပန်း ၊ သရက်သီး ပိန္နဲသီးမှည့် ၊ သံပုရာ ရှောက်သီး တွေ ရောင်းထားလို့ စုမိဆောင်းမိ ရှိတာရော ၊ အမေ လဲ ကျောင်းပိတ်တော့ အားတာကတကြောင်း ရောပေါင်းပြီး အိမ်မှာအလှူ လုပ်တာ များပါတယ် ။
နောက်ပြီး ၀ါဆိုလပြည့် ဆို ရှင်ပင်စာကြို ဘုရားကြီး ပွဲလဲ ရှိတာကြောင့် ဘုရားကြီးတ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့ လက်ပန်ကျွန်း ရွာသစ် ၊ ရွာမ တို့ ကလဲ ဘုရားပွဲလာ သူတို့ ကိုကျွေးဘို့ မုန့်ဆီကြော် ၊ မုန့်လက်ကောက် ၊ နှမ်းဝိုင်းမုန့် ၊ မုန့်ဖက်ထုပပ် အဖြူ အနီ စတာတွေ လုပ်ကြပါတော့တယ် ။ အိမ် မှာလဲ လာပို့ ကြတဲ့ မုန့်တွေ လျှံနေပါဘဲ ။ အိမ်နီး နားချင်းတွေ ပြန်ဝေ တန် တာလဲ ဝေ ၊ အိမ်က လူတွေ လဲ စားပွဲပေါ် အုပ်ကြီးတွေ နဲ့ထည့်ပြီး ထွက် တလုတ် ၀င် တလုတ် စားကြ ပါတယ် ။ ကောက်ညှင်း အနည်းအများ ပေါ်မူတည်ပြီး မုန့် တွေ က ခန နေ မာသွားတတ်တာကြောင့် အမြန် စားရတာ ဗိုက် ကို ကားနေတာပါဘဲ ..:D
ကျမ လဲ ဘလော့ လာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေ များကို ရှိတာလေး နဲ့ ဧည့်ခံပါရစေနော် ....:=))))
အခု တော့ ဒီလို အလေ့အထ တွေ မုန့် တွေ နဲ့ ဝေးနေတာ ဆယ်စု နှစ် တနှစ် မက ရှိခဲ့ပါပြီ ။ ကျမ တို့ စလေ စက်ရုံမှာလဲ အင်တာနက် သုံးနေပြီဆိုတော့ ဒီရက်ထဲမှာ ပြန်ဆက်သွယ်မိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ က ဒီနေ့ ဘုရားကြီး ပွဲ ရှိတယ် ၊ မုန့်တွေ ပေါ နေပြီ နဲ့ ပြောပြတော့ ဒီခေတ် ဒီအခါ ဒီလို ခေတ် အကျပ်ကြီးထဲမှာ ဒီလို အလေ့ အထ တွေ ရှိနေသေးတယ် လို့ ၀မ်းသာမိသလို အောင်းမေ့ လွမ်းဆွတ် ၀မ်းနည်းရပြန်ပါတယ် ။
ကျမ ရဲ့ သမီးလေး သာ ဘေးမှာ ရှိခဲ့ရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ရွတ်ဆို ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး ကို သမီးလေး နားလည်လည် မလည်လည် ရွတ်ပြမိဦးမှာပါဘဲ ...
၀ါဆို ၀ါခေါင် ရေတွေကြီးလို့
သပြေသီး မှည့် ကောက်စို့ကွယ်
ခရာ ဆူးခြုံ ဟိုအထဲက မျှော့နက်မဲကြီးတွယ်လိမ့်မယ်
ကောက်မယ် သွားမယ် ...။
ကဗျာရေးသူ ကိုရော စာသား ကိုပါ အတိအကျ ပြန်မမှတ်မိလို့ ကျမ မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေးထားတာပါ ။
သမီးလေး နားလည်တဲ့ အရွယ်ရောက် လို့ ကျမ ဒီကဗျာလေး ရွတ်ပြရင် သမီးကရော ဒီထဲ က သပြေသီး တို့ ခရာဆူးခြုံ တို့ မျှော့နက် တို့ ဆိုတာ နားလည်ပါ့မလား လို့ တွေးမိပါတယ် ။
စင်္ကာပူ မပြောနဲ့ ရန်ကုန်မှာတောင် သပြေသီး ဆိုတာ မတွေ့မိဘူး ။ အညာမှာတော့ ခရာပုံ ပန်းသေးသေးလေးတွေ ပွင့်တဲ့ ဆူးခြုံ ဆိုတာ ပေါ မှ ပေါ ။ ရေ ကြီးတာ ကို အင်တာနက်မှာ ကျမ ရှာပြလို့ ရပေမဲ့ ၀ါဆိုဝါခေါင် မိုးဦး ကျ မှာ ကျမတို့ မြန်မာပြည် ရေမြေတောတောင် သဘာဝ အရ ချောင်းရေလျှံ မြစ်ရေတိုးပြီး ဖားတွေ မျှော့တွေ ရေမြွေ တွေ ထွက်တတ်တာ ကလေး သဘာဝ စက္ကူလှေ ၊ ဖိနပ်စုတ် တွေ မျှော ကြတာတွေ ကို ဘယ်လို ရှင်းပြ ရ ပါ့မလဲ ။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျမ ရဲ့ သမီးလေး ကို ဒီလို ချစ်စရာ အလေ့အထ ၊ဓလေ့ လေး တွေ နဲ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် စေချင်ပါတယ် ။....။
Posted by Thandar Lwin at Thursday, August 02, 20124comments:
Labels: လပြည့် နေ့ များ